Zvido uye zvesainzi zvemuzhizha reSan Miguel | Network Meteorology
Zhizha reSan Miguel
Anenge makore ese, panosvika kupera kwaGunyana, tembiricha dzinotanga kudzikira nekuda kwekuuya kwematsutso. Zvisinei, mukati mevhiki yaSeptember 29, kudziya kunokwira zvakare. Izvi zvinozivikanwa se zhizha reSan Miguel. Iri svondo umo matembiricha anomuka sekunge tiri kudzoka kuzhizha.
Muchikamu chino iwe unozogona kuziva izvo zvinoda kuziva uye zvesainzi zviitiko zhizha reSan Miguel. Iwe unoda kutsvaga zvakavanzika zvaro zvese here?
1 Zhizha reSan Miguel rini?
2 Nei ichinzi Quince Zhizha?
3 Kune here chirimo cheSan Miguel gore rega?
4 Matambudziko uye mamwe mazhizha
5 Mashoko ezhizha reSan Miguel
Zhizha reSan Miguel rini?
Kana zhizha ratanga kupera, vanhu vazhinji vanotya iwo madonhwe mune tembiricha. Kudzokera kubasa, kwakajairika uye kwakaomarara nguva yechando. Kazhinji, iyo thermometer inotanga kudonha kana Nyamavhuvhu ichitenderera uye mwaka wekudonha uchitanga. Zvisinei, muvhiki inopera Nyamavhuvhu 29Pazuva reSan Miguel, kudziya kunokwira zvakare kunge zhizha rave kudzoka.
Munguva ino tembiricha yezhizha yemadhigirii makumi matatu inosvika muSpain. Zvinoita sekunge zhizha rinodzoka kuzoonekana kusvika gore rinotevera. Zita reiyo zhizha diki riri nekuda kwemhemberero yezuva raSan Miguel, munaGunyana 30.
Mune dzimwe nzvimbo inozivikanwa se Veranillo del Membrillo kana Veranillo de los Arcángeles. Uye ndeyekuti inguva diki yenguva ine tembiricha inonakidza kwazvo inoita kuti kupinda kwechando kunakidze. Kune mamwe mazuva enguva ino iwo muganho pane zvakatipoteredza mamiriro ataive nawo muzhizha. Zvisinei, mazuva gare gare, matsutso anodzoka nemhepo inotonhorera inotonhorera.
Zvinowanzoitika mukupera kwaGunyana uye kutanga kwaGumiguru. Iyi nguva yetembiricha yakakwira haina hanya nechero chinhu chakakosha. Iko iko kuchinja mumhepo kunokonzera kushanduka kwekushisa uye anticyclonic mamiriro ekunze anofarira mamiriro ekunze akanaka.
Nei ichinzi Quince Zhizha?
Takataura kuti inogamuchirawo zita iri uye imhaka yekuti pamazuva aya ndiyo apo iyo quince inokohwa.
Iyi nguva yenguva yakabhabhatidzwa nevarimi vaitaura nezvenguva yekukohwa yechirimwa ichi. Pakutanga, quinces dzaidzivirirwa nemwarikadzi werudo Aphrodite. Nekudaro zvinonzi iyo quince chibereko cherudo.
Kune here chirimo cheSan Miguel gore rega?
Iri zhizha diki hachisi chinhu chinopfuura chegore rega remuchadenga episode. Pakati peaya mazuva tembiricha inomuka kuti igare kwevhiki uyezve inodonha zvakare. United States ine chiitiko chakafanana chinonzi Indian Zhizha (Indian Zhizha). Munyika dzinotaura chiGerman inonzi Altweibersommer.
Chaizvoizvo chimwe chinhu chakafanana chaizvo chinoitika kumaodzanyemba kwenyika kutenderera June 24. Kwavari, nguva yechando inotanga panguva ino. Zvisinei, kutenderera zuva reSan Juan, tembiricha inodzoka yakati rebei yakafanana neayo epano. Vanodaidza iyi nhambo chirimo cheSan Juan.
Kunyangwe paine zvirevo zvakawanda zvemamiriro ekunze, sainzi inogona kutsanangura zviuru nezviuru zvezvirevo nezvitendero zvakakurumbira. Nekudaro, mune ino kesi, hapana chikonzero chesainzi chekururamisa ino zhizha. Asi zvinokwanisika kutsanangura zvimwe zvikonzero nei zvichiitika.
Munguva yekupera kwaGunyana, zhizha repamutemo rasvika kumagumo. Panguva ino, yekutanga mhedzisiro yechando iri kutotanga kunzwikwa mudenga. Inguva yakakosha pakati pekuchinja kwemwaka umo mazuva anotonhorera anowanzo sanganiswa neanodziya. Naizvozvo, mamiriro ekuchinja inowanzo kukonzera mazuva mashoma emamiriro ekunze akanaka mushure mekutanga kwekudonha kwetembiricha mumatsutso.
Kwete gore rega rega panofanirwa kuve nezhizha reSan Miguel. Iwo maitiro anoenderera gore gore asi haafanire kuitika.
Matambudziko uye mamwe mazhizha
Kune makore mazhinji mave muine zhizha reSan Miguel, asi mamwe marisina. Pane imwe nzira yakafanana pamisi iri padhuze naNovember 11, iro zuva rinopembererwa San Martín. Mazuva ano isu tinotambura kwekupedzisira "kurohwa" kwezhizha nekukwira kwetembiricha. Mune ino kesi, kusimuka hakusi kwakadzika kunge muzhizha, asi zvinotiyeuchidza zvimwe zvechitubu. Iwe unogona kuti izhizha rinotinyevera kuti richakurumidza kudzokera kwatiri uye kuti tine moyo murefu.
Kuti zhizha kuitika kana kwete inyaya ingangodaro. Mazuva anodziya uye anotonhorera anochinjika akajairika mumwaka wekushanduka wakadai sechitubu nematsutso. Ivo vakadaidzwa nekuti zvinoenderana nemazuva ekupemberera kwevatsvene.
Kana isu tikatarisa kumashure kumakore, tinogona kuona kuti kwave kune makore matisina kumbove nezhizha reSan Miguel. Tine mafashama muMurcia muna 1664 na1919 (vane mamakisi evakafa); muna 1764 muMalaga, muna 1791 muValencia uye muna 1858 muCagagena. Musi waSeptember 29 na30, 1997, mafashama anorwadza akaitika muAlicante
Dzimwe dzichangoburwa mafashama ayo kubva musi waGunyana 27 kusvika 29, 2012 akakanganisa Lorca, Puerto Lumbreras, Malaga, Almería kana Alicante, iyo yakatotora hupenyu hwakati wandei. Naizvozvo, isu hatisi neimwe sainzi iyo inodziya episode inofanirwa kuitika gore rega.
Mashoko ezhizha reSan Miguel
Sezvatinoziva, chirevo chakakurumbira yakapfuma kwazvo mune zvese zvine chekuita nemamiriro ekunze uye zvirimwa. Mune ino kesi, aya ndiwo mazwi anonyanya kuzivikanwa emazuva iwayo:
Kuna San Miguel, kupisa kukuru, kuchave kwakakosha kwazvo.
Panguva yezhizha yeSan Miguel kune michero yakaita seuchi
MunaGunyana, pakupera kwemwedzi, kupisa kunodzoka zvakare.
Kuna San Miguel, kutanga walnut, chestnut gare gare.
Zhizha reSan Miguel rinoshayikwa zvakanyanya
Michero yese yakanaka nekupisa kweSan Miguel.
Neruzivo urwu iwe unozogona kudzidza zvakawanda nezve ino diki zhizha yatinopembera nemufaro pamberi peanodonha madonhwe mumatsutso tembiricha uye kusvika kwechando chando.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Kuparadzanisa » Zhizha reSan Miguel
Chii uye sei iro rezvematongerwo enyika dzidziso rinoshanda?